Forum serasera malagasy NY EVENEMENTS ESCHATOLOGIQUES NA IREO ZAVATRA HITRANGA HANAMBARA NY FIAVIAN NY FARANY - Dinika forum.serasera.org
NY EVENEMENTS ESCHATOLOGIQUES NA IREO ZAVATRA HITRANGA HANAMBARA NY FIAVIAN NY FARANY
Fitohizan'ny hafatra : NY EVENEMENTS ESCHATOLOGIQUES NA IREO ZAVATRA HITRANGA HANAMBARA NY FIAVIAN NY FARANY
RBNIR - 15/10/2012 12:04
Ara ny nambara dia hezahina zaraina eto ny zava-miafina rehetra,
Misaotra Azy lehibe noho izany,
Androany dia mikasika ny Evenements eschatologiques (ireo zavatra hitranga entina hanambara ny fihavian'ny farany) no atomboka ho zaraina eto indray anio,
Atomboka hoy aho satria tsy ho vita indray andro izy ity. Mety efa novakiantsika matetika izao manaraka izao nefa tsy fantantsika hatramin'izay ho inona marina no tiany ambara.
Mat.24:3 Araka io teny io dia toa manontany ny Tompo ireo mpianatra manao hoe :
Inona avy ny zavatra hitranga vao ho tonga ny fihavianao sy ny farany?
Jesosy Tompo kosa raha namaly azireo dia toy ny manao hoe Izao avy ny zavatra hitranga.
Dia nitanisa IZY ireo EVENEMENTS HIFANDIMBY eto an-tany ary hanambara ny farany.
1ERE EVENEMENT (na ny zavatra hitranga voalohany) : Mat.24:4-13
Ireo voalaza ao dia zavatra rehetra efa nisy nanomboka tamin'ny andron'ny apostoly ka mandraka androany. Raha tsy hilaza afatsy ny ady sy filazana ady aho (dia tsy misy izay tsy mahalala ny zava-mitranga any amin'ireo firenena Arabo maro isika amin'izao fotoana izao)
Ny mosary (Ethiopie sy ny kere any atsimo) ny horohoron-tany (ny nitranga vao haingana tamin'ity taona ity tany Haiti)
Kristy sandoka (tsy ilay kristy sandoka hiseho eny amin'ny lanitra no lazainy eto fa ireo olona mitonona ny tenany ho kristy (eto amin-tsika izao dia efa misy).
Ny zava-dehibe tokony hotsarovana amin'io 1ER EVENEMENT io dia ilay tenin'ny Tompo ao amin'ny Mat.24:6 hoe "....AZA MATAHOTRA TSY MAINTSY HO TONGA IZANY NEFA TSY MBOLA TONGA NY FARANY.
Io 1 ERE EVENEMENT IO MOA DIA nomen'ny Tompo anarana hoe Mat.24:8 :...."FIANDOHAN NY FAHORIANA.
Izay no 1 ERE EVENEMENT, tsy tokony hatahotra isika hoy izy satria tsy maintsy ho tonga izany nefa tsy mbola tonga ny farany.
Fa rahoviana no ho tonga ny farany?
2 EME EVENEMENTS : Mat.24:14 Ary hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazan-tsaran'ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra vao ho tonga ny farany.
Betsaka ny fitoriana nihezinezina natao teto amin'izao tontolo izao, nefa tokony hahatonga saina an-tsika hoe maninona no mbola tsy tonga ny farany. Eny azo lazaina fa efa samy nitoriana ny filazantsara avokoa na hatramin'ireo toerana faran'ny madinika aza.
Ny antony??? tsy mbola iay filazan-tsara no notoriana ry namana.
Ny zavatra tsy maintsy hisy dia FITORIANA LEHIBE FARANY tahaka ny tamin'ny andron'ny apostoly.
Ireto no mampiavaka azy :
1 FITORIANA NY FAHAMARINANA REHETRA AO AMIN NY BAIBOLY (TSY ANAMPIANA TSY ANALANA).
2 Eo ambany fitarihan'ny FANAHY MASINA ary OMBAN NY FAMATARANA SY FAHAGAGANA LEHIBE.
Azon-tsika homena lohateny io Evènement faharoa io hoe FITORIANA LEHIBE FARANY.
Rehefa miseho io dia hoy ny Tompo hoe VAO HO TONGA NY FARANY.
Izay aloha no azo atolotra hatreto fa mbola misy maro ireo Evènement hifandimby alohan'ny tena hahatongavany farany ka raha mangetaheta ianao dia angataho AMINY mba hovoalaza eto ny tohiny.
lovegod - 15/10/2012 15:54
Miala tsiny fa ny hevitra tsy azo hono mampihazohazo
Mba hazavao bebe kokoa ny hevitrao fa manjary miteraka fanamarihana kely ny zavatra lazainao. Tena sÃ»r et certain ve ianao amin'ny fanambaranao?
1/ talohan'ny niavian'i Kristy ve dia tena tsy nisy ady mihitsy?
2/hoy ianao koa hoe: "fiandohan'ny fahoriana.." raha ny fahalalako azy talohan' matio tanisanao io dia tena tao anatin'ny fahoriana ny vahoaka jiosy fony ry zareo nandevozina tany Egypte
3/ SÃ»r ve ianao ny mosary dia tao ethiopie sy kere any atsimo ihany no nisy teto fa talohan'izany tsy misy...
mbola hitohy ny 2è évènement...
RBNIR - 15/10/2012 16:07
Faly miarahaba anao ary misaotra anao namana lovegod,
Manomboka eo amin'ny Mat.24:3 ny namborahan'i Jesosy Kristy io.
Ny mpianatra raha nanontany dia hoy izireo hoe "rahoviana no hahatongavan'izany" (mbola ho avy ny anontaniany eto) futur
Toy izany koa raha namaly ny Tompo dia hoy izy hoe "handre" (mbola ho avy ihany koa no navaliny eto)
Raha miohatra tamin'ny fotoana nifampiresahin-drizareo dia "mbola ho avy no noresahina" namana. Raha ny marina dia tamin'io fotoana nifampiresahin-drizareo io ka hatramin'izao isika miresaka izao.
Somary lavalava nefa dia tena ao anatiny tsara isika izao ry namana satria ireo famantarana rehetra voatanisan'i Jesosy Kristy Tompo ireo dia miseho avokoa ankehitriny.
Samia ho tahin'ny Tompo e, mbola hitohy.....
moustaraf - 16/10/2012 15:20
Misy hotenenina kely momba ity andininy ity:
" Mat.24:14 Ary hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazan-tsaran'ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra vao ho tonga ny farany".
-Ny version originale (Hebreo) izay lazaina fa nakana ny dikan-teny malagasy dia Tsy "io " no lazainy fa: "Hotoriana @ firenena rehetra any @ izao tontolo izao ny filazan-tsaran'ny fanjakana"; @ dikan-teny hebreo ny faminaniana ho an'ny "Firenena = Israely sy joda = foko 12, izay naely any @ izao tontolo izao. Ireo no hangonina sy haverina indray @ fanekena vaovao. IREO NO HITORIANA NY FILAZAN-TSARA.
-Tsy mbola ho tonga ny farany satria mbola ao anatin'ny APOK 13 isika izao, "ary nanokatra ny vavany hiteny ratsy an'i Elohym izy, ....ny anarany sy ny tabernakeliny"
Mbola ireo fivavahana miteny ratsy ny ANARANA no mibahan-toerana eto ambony tany amin'izao: Andriamanitra=fatina mpanjaka malagasy /GOD, Got,Dieu....= sampy grika avokoa,
-Izy ireo dia manao FAMANTARANA LEHIBE ary mandresy lahatra ny maro (Apok 13:13)
-Ny mpitondra firenena sy ny matanjaka rehetra dia miara-monina ao= "Tsy hisy hahazo hividy na hivaarotra afa tsy izay manana ny marika= Ny MARIKA DIA NY ANARAN'NY BIBIDIA"
-Mbola mametaka ny ANARANY @ handrin'ny olona rehetra manaiky hiantso anaran-tsampy, sy izay anarana noforonin'olombelona NY BIBIDIA.
-Mbola vao manomboka ny fiantsoana sy famerenana ny Israely izay naely, ary miAndoha ny fitoriana ny filazan-tsaran'ny FANJAKANA.
RBNIR - 16/10/2012 16:16
Faly miarahaba ny namana rehetra hatrany,
Misaotra ny Tompo hatrany ry namana isany noho ny famelany an-tsika hanohy ny fizarana eto indray,
Evènements 2 izay no hitan-tsika «Ny fiandohan’ny fahoriana» sy ny FITORIANA LEHIBE FARANY,
Inona ny 3 ème Evènement? Mat.24:15-22
Hatramin’ny voalohany ny fitoriana ny fahamarinana dia nisy fahavalo hatrany ary ny fanenjehana dia tsy nisaraka taminy mihitsy.
Jesosy Kristy no niharan’ny fanenjehana voalohany, ireo mpianany kosa no nandimby azy.
Hiroborobo fatratra ilay FITORIANA LEHIBE FARANY hitoriana NY FAHAMARINANA, Hiasa ilay ratsy hitsangana hanohitra izany.
Andininy faha 15 :Â« Koa raha hitanareo mitsangana ao amin'izay fitÅ“rana masina ny fahavetavetan'ny fandravana, izay nampilazaina an'i Daniela mpaminany (Dan. 12. 11; 9. 27) (aoka hisaina izay mamaky izany), Â»
Ataoko eto ihany koa ny dikan-teny frantsay hampahazava azy tsara.
Arak’io teny io dia ho avy ny fotoana izay Â« hitsangana ny fahavetavetan’ny fandravana eo amin’ny fitoerana Masina» Eto ny teny hoe hitsangana midika hoe hitoetra (établi).
Azo adika araka izany hoe Hisy ny fotoana izay hahatafatoetra ny fahavetavetan’ny fandravana eo amin’ny fitoerana Masina.
Inona ny dikan’izany ? Â« Araka izay voalaza ao amin’ny bokin’ny daniela hoy ny TENY.
Inona no voalaza ao amin’ny bokin’ny daniela ? Â« Ary hiteny hanohitra ny Avo Indrindra izy sy hampahory ny olo-masin'ny Avo Indrindra ary hitady hanova fotoana sy lalàna; ary hatolotra eny an-tànany ireo ambara-pahatapitry ny fetr'andro iray sy ny fetr'andro roa ary ny antsasaky ny fetr'andro. Â» (Dan. 7:25).
Hisy olona iray hitoetra eo amin’ny fitoerana Masina ka hanantanteraka ireo voalaza ao amin’ny bokin’ny Dan.7:25 ireo.
Io dia tsy iza fa ilay Bibidia voalaza ao amin’ny bokin’ny apokalipsy toko faha 13 ihany,
Hanova fotoana sy lalana izy io ary hanohitra ny fahamarinan’Andriamanitra ka hanjaka amin’ireo kristianina rehetra.
Azavaiko : io bibidia io no hitsangana ho lohan’ny fiangonana kristianina rehetra ka ny lalàna izay hapetrany no hanereny ny olona rehetra . Izay tsy manaraka dia hohenjehiny sy hovonoiny.
Mazava ho azy, ny lalàna izay apetrany dia hifanohitra amin’ny ampianarin’ireo olona hitory ao amin’ilay FITORIANA LEHIBE FARANY.
Fehiny, hanjaka amin’ny kristianina rehetra izy ary hanenjika sy hamono ireo rehetra tsy hanaiky azy.
Vakio tsara ilay Mat.24:15-22 fa hisy fahoriana lehibe izay mbola tsy nisy toa azy amin’izany fotoana izany.
Ary asain’ny Tompo mandositra ireo mpanompony raha vao mandray fanjakana io bibidia io.
Ao anatin’io fotoana hanjakan’ilay bibidia io ihany koa no hotanteraka ity teny manaraka ity Â« Aza mety hofitahin'olona akory ianareo; fa tsy ho avy izany, raha tsy efa tonga aloha ny fihemorana, ka hiseho ilay lehilahin'ota, dia ilay zanaky ny fahaverezana, Â» (2 Tes. 2:3)
Ny lehilahin’ota dia tsy iza fa ilay bibidia ihany, ary ny fihemorana dia ny fihemorana dia ny fivadihan’ireo olona nanaraka ny fahamarinana ka tsy nahazaka ny henjika sy ny famonoana nataon’ilay bibidia.
Azon-tsika omena lohateny hoe FANJAKAN NY BIBIDIA MIAMPY FANENJEHANA io 3ème Evènement io.
Samia ho tahin’ny Tompo namana
RBNIR - 16/10/2012 16:26
Faly miarahaba anao manokana namana moustaraf,
Ary tsy notonon'ny namana ireto teny voasoratra ao amin'ny apokalipsy 13 ireto an:
Â«Â Ary navela hiady tamin'ny olona masina izy ka haharesy azy;.....Â Â» (Apok.13:7)
Io ihany mantsy ilay voalaza ao amin'ny Dan.7:25 "hampahory ny olomasin'ny avo indrindra "
Tena efa mitoetra ao amin'ny apokalipsy 13 marina v isika amin'izao fotoana izao namana??????
Fa mbola tsy novalianao mihitsy aho hatramin'izao an,
IZY MIVANTANA v ho aho no nifidy sy nampianatra ilay mpanangana???
Samia ho tahin'ny Tompo e
ziva6 - 18/10/2012 00:41
ity misy fanadihadiana d anjarantsika no mandinika
ziva6 - 18/10/2012 00:43
ziva6 - 18/10/2012 04:38
RBNIR - 22/10/2012 13:25
Dia mbola misaotra ny Tompo hatrany fa mbola avelany mizara eto indray ny tohin'ity zava-miafina ity ry namana isany:
4ème Evenements : Mat.24:23-28
Mbola hisy koa ny kristy sandoka sy ny mpaminany sandoka, saingy amin'ny endrika sy fomba fiasa vaovao izay hahafitaka ny maro na dia ny olom-boafidy aza.
isy toy izany koa amin'ny andro farany ny fihavian'ilay Kristy sandoka. Tsy inona izany fa ilay bibidia izay ho feno ny herin'i satana no hanova ny endriny ho toy ny endriky Kristy ka hisalotra voninahitra lehibe. Hanidina eny amin'ny rahona izy amin'izany ary hotronin'ireo anjely maroben'i satana (toy ny tena fihavian'i kristy). Hitety ny faritra maro manerana izao tontolo izao ka hilaza ombieny ombieny hoe : IZAHO NO ANDRIAMANITRA. Ho maro tokoa ny ho voafitany ka hiankohoka eo anatrehany, eny fa na dia ny olom-boafidy aza (hoy ny Tompo)
Misy marika hamantarana azy ihany anefa araka io teny io, ary indrindraindrindra ny tena olom-boafidin'Andriamanitra, izay hitoeran'ny Fanahiny Masina, rehetra dia hahafantatra ho azy fa kristy sandoka io fa tsy Ilay tena IZY, TADIDIO MANDRAKARIVA " .....tahaka ny helatra avy any antsinanana ka hita hatrany handrefana. " Mat.24:27 NY MASO REHETRA HIARAHAHITA FA TSY TOERANA VITSY FOTSINY IHANY AKORY ARY TSY ANY ANATY SALLE IHANY KOA.
1- Apok.13:2 (ilay dragona na ny devoly no manome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany (fanjakany) ary ny fahefana lehibe. Io no ahafahany manao fahagagana lehibe hamitahana ny olona.
2- Raha tohizana ny famakiana ny 2 tes.2 Â«Â ilay manohitra ka manandra-tena ho ambony noho izay rehetra atao hoe Andriamanitra, na izay ivavahana, ka dia mipetraka eo amin'ny tempolin'Andriamanitra izy ka manao ny tenany ho Andriamanitra.Â Â» (2 Tes.2:4)
Io ilay hoe "mitsangana eo amin'ny fitoerana Masina.....manao ny tenany ho Andriamanitra IZAHO NO ANDRIAMANITRA(izay ihany koa no mahatonga azy sahy hanova ny fotoana sy ny lalàna satria mihevitra izy fa mitovy amin'Andriamanitra ka afaka manova ny lalany sy ny fotoanany).
Â«Â ny fihavin'ilehiny dia araka ny fiàsan'i Satana amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fahagagana mandainga rehetraÂ Â» (2 Tes.2:9) Ny fiaviana lazaina eto dia ilay fiaviana sandoka hisandohany ny fiavian'ilay TENA IZY. ary araka ny voalaza eto dia araka ny fiasan'i Satana (izay no mahatonga azy manidina ary mahafitaka ny maro).
TANDREMO RY NAMANA ISANY FA MAHAVERY ANY AMIN NY AFOBE NY VOAFITAK'IO BIBIDIA MISANDOKA HO KRISTY IO;Â«Â Ary nisy iray koa, dia anjely fahatelo, nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe: Raha misy miankohoka eo anoloan'ny bibi-dia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny handriny na amin'ny tànany,Â Â» (Apok.14:9)
Â«Â dia izy koa no hisotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra, izay naidina tao anatin'ny kapoaky ny fahatezerany tsy miharoharo zavatra, sady hampijalina amin'ny afo sy solifara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny Zanak'ondry iry;Â Â» (Apok.14:10)
Â«Â ary ny setroky ny fijaliany dia miakatra mandrakizay mandrakizay; ary tsy manam-pitsaharana na andro na alina izay miankohoka eo anoloan'ny bibi-dia sy ny sariny, na izay mandray ny mariky ny anarany.Â Â» (Apok.14:11)
Izay ny 4ème Evènement azo omena ny lohateny hoe KRISTY SANDOKA izay fiaviana sandoka avy amin'ny rahon'ny lanitra ka hamitaka ny maro eny fa na dia ny olomboafidy aza.
Samia ho tahin'ny Tompo indray
zamanay - 23/10/2012 14:20
Mbola misy tokony horesahina ankoatry ny tian'ise ho resahina satria tsy ampianarina any am-piangonanareo le izy. Holazaiko anao am manaraka satria za mbola maika hody
RBNIR - 23/10/2012 14:55
Faly miarahaba ary koa misera aminao namana,
Amin'ny manaraka indray izany e
zamanay - 23/10/2012 15:18
Misaotra namaly sahady fa miresaka eo za refa tonga noho ny fitahian'ny Tompo. Somary mbola sahirana manokatra lay serasera manko za ka tsy dia omentsiny loatra angamba raha elaela vao mahasoratra.Dia veloma ho tahian'ny Avo Indrindra àry e. Zay vao tena lasa e
Miharena - 26/10/2012 10:27
Efa hita taratra ve namana RBNIR ilay Kristy Sandoka?
RBNIR - 26/10/2012 12:18
Tohiny sady farany,
Dia mbola misaotra Betsaka ny Tompo hatrany fa mbola avelany hizara eto hatrany isika.
5 ème Evènements : Mat.24:29-31TONGA NY FARANY,
Rehefa tanteraka ny zavatra rehetra dia hohozongozonina ny herin'ny lanitra ka hiseho ny famantarana lehibe, HO MAIZINA NY MASOANDRO, mazava ho azy NY VOLANA TSY HAZAVA, ARY NY KINTANA DIA HIRARAKA. Izany no famantarana farany indrindra izay mialoha ny hisehoan'i Kristy amin-kery sy voninahitra.
Araka ireo dia ao anatin'ny haizim-pito no ipoiran'ny voninahitry ny fiaviany ary hanomboka hitomany ny firenena rehetra. Hampenenoana mafy ny Trompetra ary hirahiny ny Anjeliny hanangona ny olom-boafidiny avy amin'ny vazan-tany efatra, hatramin'ny faravodilanitra rehetra.
===> Tonga ny farany na ilay hoe ANDRON NY TOMPO (le JOUR DU SEIGNEUR);
Inona ary no tokony atao?
Mat.24:32,33 MILA MIOMANA,
1 Jao.3:7 MILA MAMANTATRA ARY KOA MANAO NY MARINA,
Koa raha tianao dia araho hatrany fa raha sitrapon'ny Tompo dia ho fantatrao ny marina rehetra.
Samia ho tahin'ny Tompo ry Namana isany
RBNIR - 26/10/2012 12:30
Faly miarahaba namana,
Ilay Kristy Sandoka hisandoka ny fiavian'ny Jesosy namana dia mbola any amin'ny 4ème Evènement,
Ny fanjakan'ilay Bibidia no efa manomboka arafitr'i satana ankehitriny (fanovana ny lalàna sy fotoana napetrak'Andriamanitra) saingy tsy hiseho amin'ny tena endriny maha Bibidia azy marina raha tsy efa ao amin'ny 3è Evènement,
Samia ho tahin'ny Tompo namana.
Miharena - 27/10/2012 16:02
Misaotra namana RBNIR amin'ny fanazavana.
Fa ny mba tiana ho fantatra dia hoe ts efa azon'ny mpandinika an-tsaina avokoa ve ny antony mahatonga ireo évènement lazainao ireo?
Ny fototra ara-Baiboly moa aloha no resahanao ao amin'ny fitantarana ny fitrangan-javatra. Fa raha dinihina amin'ny fiainana an-davanandro, tsy efa anisan'ny hita taratra ve ireo resaka fisehon'ny Antikristy ireo?
Inona koa no endrika tiana hisintonana ny Kristianina, izay zavatra hita ivelany ve sa izay hitranga ao anatin'ny olona tsirairay avy?
Raha resaka fanovana lalàna; voafetran'ny resaka fanovana andro ve izany sa ny famoahana ny olona tsy hijery ao anaty an'Andriamanitra (izay anisan'ny famoahana tsy hijery anaty ny fampitodihana ny olona hijery andro izay tsy ao amin'Andriamanitra satria IZY dia mandrakizay ) ?
Inona no tanjona raha voaboasana ny évènement ary tokony hiteraka inona eo amin'ny fahamatoram-pinoan'ny olombelona?
Ialàna tsiny raha lavalava ilay fanontaniana ary misaotra anao avy hatrany amin'ny valin-teny omenao namana
RBNIR - 29/10/2012 10:37
Faly miarahaba ny namana rehetra hatrany ary koa faly miarahaba anao manokana namana Miharena,
Â«Â Dia hoy Izy: Hianareo no navela* hahalala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra; ......Â» (Lio.8:10)
Raha isan'ireo hoe "HIANAREO" izy dia hahalala namana fa raha tsia kosa dia tsy ho azony an-tsaina velively izany.
Ilay resahiko namana tsy Antikristy fa Kristy sandoka (faux christ) misandoka ho kristy fa kanefa tsy IZY. Famitahana no hataony.
Ny rafitra rehetra manova ny fotoana sy lalàna napetrak'Andriamanitra namana dia rafitra tsy avy AMINY velively (vakio tsara ilay Dan.7:25) ary midika ho fanoherana AZY mihitsy aza satria mahasahy mikitika izay zavatra takiany. (Tsy mahagaga aloha raha hovitan'ilay bibidia izany satria izy hanao ny tenany ho ambony noho izay Andriamanitra hivavahana).
Tsy misy tsiny akory namana,
Ny tanjona dia mba hiomanan'ny tsirairay. Mba ho fantatry ny olona tsirairay avy ny vanim-potoana misy azy ka hahafahany miambina tsara. Ary indrindra indrindra tsy ho voafitaka tadidio MAHAVERY NY MIANKOHOKA AMIN NY BIBIDIA.
Miharena - 29/10/2012 21:26
MAHAVERY NY MIANKOHOKA AMIN NY BIBIDIA.
Misaotra anao namana amin'ny valinteny nomenao.
Ny fanazavàna lalindalina kokoa no tiana havoitranao tamin'ireo fanontaniana ireo, indrindra indrindra fa eo amin'iay resaka hoe FIAINAN'I KRISTY AO ANATY fa tsy ivelany.
Mazava fa mivenjivenjy sy mitodika any amin'ny tsy izy ny olombelona rehefa mitady an'Andriamanitra tsy miaina ao amin'ny tenany. Izay no fahazoako ny atao hoe Fanahy Masina, ida ny Fanahy mampiray ny olombelona amin'Andriamanitra ka tonga tena iray AMINY nilazan'i Krsity araka nyfampianarana hoe : Izaho sy ny Ray dia iray ihany ary nivavahany ny hahairay ny olona tsirairay avy ao AMINY sy ny RAY. Io no atao hoe firaisana na ny marina kokoa TENA IRAY.
Ny mahatonga ny fiankohofana dia misy iray milaza ny tenany fa ambony. Tsy io anefa no nampianarin'i Kristy. Raha niteny IZY hoe Ny Ray IRAY ihany no Masina, tsy midika izany fa iankohofana ny RAY.
Koa marina ny filazanao hoe hiseho ny Kristy mangataka iankohofana ka mampatahotra ahy ny fipetraky ny Kristianina ankehitriny, sao dia tsy izy ny Kristy iankohofany ankehitriny io?
Ny 3è Testament moa dia manamarina io fanambarana hoe tsy tokony hiankohofana IZY araka ny fampiianaraNY. (Asa na efa novakianao io boky io na tsia, ary raha novakianao ve izy io dia manambara ny zavatra tena tian'i Krsity nampitaina tamin'ny andron'ny TT sy ny Testamenta Vaovao?
Amiko raha nataoko tsara ny fandinihina rehetra dia izay olombelona mihevitra fa lavitra azy ANdriamanitra fa tsy miteny arak'i Paoly hoe i Kristy no velona ato anatiko sy mahatoky ny Teny ao amin'Isaia nilaza hoe "Amin'izany andro izany dia hampitoeriKO ao amin'ny olona ny fanahiKO, ary IZAHO hilaza hoe : Iizy ho oloko ary Izaho no Andriamaniny" no tratran'ny fandrika hiankohoka amina Andriamanitra voafariparitra ho mitoetra ao an-danitra fotsiny ihany.
Ka mampandinika tsara ihany izany hoe sao dia ny fomba fivavahana ankehitrny mihitsy no diso ka mahavery?
Ny very tiana ambara dia izay tsy mahatsapa an'Andriamanitra ao anaty noho ny fitadiavana AZY ivelany.
RBNIR - 30/10/2012 06:44
Faly miarahaba namana Miharena,
Azoko tsara ny tianao hahatongavana fa saingy tsy eto kosa ngamba no tokony hamaliana azy satria ny zavatra zaraiko eto dia ireo famantarana ny hihavian'ny Tompo sy ireo Evènements rehetra hifandimby alohan'izany fiaviana izany.
Raha amin'izay no angatahanao fanazavana dia vonona aho fa resaka ara-panahy kosa tsy tsara v raha manokatra lohahevitra hafa isika?